ချစ်လိပ်ပြာ အချစ်စာပေ: နှင်း ရဲ့ စာဂျပိုးလေး
နှင်း ရဲ့ စာဂျပိုးလေး
နှင်းဖြူဧည့်ခန်းကထပြီး အိပ်ခန်းထဲဝင်လာသည်။ ရှပ်အင်္ကျီနဲ့ဘရာချွတ်လိုက်၏။ နောက် ဂျင်းဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက်ပြီး ဘီဒိုထဲက တီရှပ်တစ်ထည် ယူဝတ်လိုက်သည်။ နှင်းဖြူ ပြူတင်းကို အမှတ်တမဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ အရိပ်တစ်ခု ဖျတ်ခနဲ မြင်လိုက်၏။ ဂရုစိုက်မနေတော့ဘဲ အိပ်ယာပေါ်လှဲပြီး အိပ်ဖို့ ကြိုးစားနေသည်။ ဒါပေမယ့် အိပ်မပျော်ဘူး။ ညနေကအဖြစ်အပျက်ကိုပဲ တွေးနေမိသည်...
ညနေက အရင်နေ့တွေကထက်စောပြီး အိမ်ပြန်ရောက်လာသည်။ အိမ်ရောက်တော့ တံခါးက အတွင်းကနေ ပိတ်ထားသည်။ အဲဒါနဲ့မေမေဆီ ဖုန်းဆက်တော့ သူပြန်မရောက်သေးဘူးတဲ့။ နှင်းဖြူအပြင်ကနေ အခန်းဆီသွားပြီး ပြူတင်းပေါက်ကနေ ကျော်ဝင်လိုက်သည်။ နှင်းဖြူက တစ်ခါတလေ အိမ်ပြန်နောက်ကျတတ်လို့ ပြူတင်းကို ဘယ်တော့မှလော့မချဘူး။
နှင်းဖြူ ကျောပိုးအိတ်ကို စားပွဲပေါ်တင်ပြီး အခန်းအပြင်ကိုထွက်လိုက်သည်။ အပေါ်ထပ်ကို တက်တဲ့လှေကားမှာ နှင်းဖြူ မောင်လေးရဲ့ ဖိနပ်ကိုတွေ့သွားသည်။
နှင်းဖြူမောင်လေးက နှင်းဖြူထက် လေးနှစ်ငယ်သည်။ ဆယ်တန်းတက်နေတာ၊ သူက စာအရမ်းကြိုးစားသည်။ နောက်ပြီး စာအုပ်အထူကြီးတွေ ဖတ်ရတာ ကြိုက်သည်။ သူ့မှာ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး။ ချစ်စရာတော့ကောင်းသည်။ နှင်းဖြူ သူငယ်ချင်းတွေက သူ့ကိုတစ်ခါတလေ စ ရင်တောင် သူကဘာမှမသိသလို စာပဲဆက်ဖတ်နေတာ...။
နှင်းဖြူ သူ့အခန်းရှေ့ရောက်တော့ တံခါးက နည်းနည်းလေးပွင့်နေသည်။ နှင်းဖြူ အခန်းထဲကိုချောင်းကြည့်တော့ မယုံနိုင်စရာပဲ။ မောင်လေးက ဘာအဝတ်မှ မပါဘဲ ဂွင်းထုနေသည်လေ။ သူ့လက်ထဲမှာ ဖုန်းကိုကိုင်ပြီး ကြည့်နေတာ။ အဲဒီမြင်ကွင်းက နှင်းဖြူကိုအရမ်း စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။ နှင်းဖြူ ဆက်မကြည့်နိုင်တော့ဘူး။ ခြေသံမကြားအောင်အောက်ကို ပြန်ဆင်းလာခဲ့လိုက်သည်။
နှင်းဖြူ တစ်ညနေလုံး တွေးနေမိသည်။ နှင်းဖြူမှာ ရည်းစားမရှိတာ နှစ်နှစ်ကျော်နေပြီ။ အခုလို ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့လီးကို မြင်လိုက်ရတော့ အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ နှင်းဖြူ တီရှပ်ပေါ်ကနေနို့တွေကို ဖျစ်နေမိ၏။ ဘရာမပါတော့ တင်းမာနေတဲ့နို့သီးလေးက တီရှပ်ထဲက ထိုးထွက်လာမလား ထင်ရသည်။ နှင်းဖြူ ပင်တီအောက်ထဲလက်လျှိုပြီး အဖုတ်လေးကို ပွတ်နေမိသည်။ နောက်ပြီးနှင်းဖြူရဲ့ အစိလေးကိုခြေနေသည်။ နှင်းဖြူ ပင်တီ စိုရွှဲမသွားခင် ချွတ်လိုက်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်ပစ်လိုက်သည်။ နှင်းဖြူရဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ အစိလေးကို ပွတ်နေရင်း နောက်တစ်ဖက်နဲ့ အဖုတ်ထဲကို ထိုးထည့်လိုက်သည်။
နှင်းဖြူ အသက်ရှုသံတွေ မြန်လာသလို လက်ချောင်းတွေလည်း မြန်လာသည်။ နှင်းဖြူရဲ့ အဖုတ်မွေးတွေကို ဆွဲပြီး ဖင်ကလည်း လက်ချောင်းရဲ့ထိုးချက်တိုင်း မလွတ်အောင် ကြွတက်လာသည်။ နှင်းဖြူ ခပ်ပြင်းပြင်း လွှတ်လိုက်သည်။ နှင်းဖြူရဲ့ပေါင်တွေပေကုန်ပြီ။ စောင်နဲ့သုတ်ပြီး ဒီအတိုင်းပဲ အိပ်လိုက်တော့သည်။ ပင်တီကို ပြန်ရှာနေရင် ခံစားမှုလေး ပျက်သွားမှာစိုးလို့...။
နောက်နေ့ မနက်ကျတော့ ပုံမှန်ပဲ မေမေက အလုပ်သွားသည်။ မောင်လေးကလည်း ကျောင်းသွားပြီ။ ဒီနေ့တော့ နှင်းဖြူ ကျောင်းတက်ချင်စိတ် မရှိဘူး။ အိမ်မှာပဲ ဂိမ်းဆော့တာပဲကောင်းသည်။ ဖလက်ရှ် ဂိမ်းတွေလေ meet n fuck စီးရီး တစ်နေကုန်ဆော့နေပြီး နေ့လည် ရောက်တော့မောင်လေးရဲ့ အခန်းဆီ တက်လာသည်။ ရောက်တော့ သူ့အခန်းတံခါးက လော့ချမထားဘူး။ နှင်းဖြူလည်း ခုတင်ပေါ် တက်ပြီးလှဲနေမိသည်။ မနေ့က အကြောင်းကို စဉ်းစားရင်းပေါ့။
ခဏနေတော့ သူ့စားပွဲဆီ ထလာပြီး computer ကို ဖွင့်လိုက်သည်။ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲလော့ချထားသည်။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး.. နှင်းဖြူ နာမည်ကို ရိုက်လိုက်တော့ ပွင့်သွားသည်။ နှင်းဖြူ မအံ့သြခင် နောက်တစ်ခုကိုတွေ့သည်။ အပြာကားတွေ အများကြီးပဲ။ အင်းဆက်တွေ ချည်းပဲ။ အဲဒီထဲကမှ my sis ဆိုတဲ့ တစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်တော့ နှင်းဖြူပဲ..၊ အခန်းထဲမှာ အဝတ်လဲနေတာ.. သိပ်မရှင်းပေမယ့် မြင်ရသည်။ နှင်းဖြူ ကိုယ်မှာ ပင်တီပဲ ဝတ်ထားတာ မနေ့က ပြူတင်းပေါက်က မြင်လိုက်တာသူပဲ။
ဘယ်အချိန် ကတည်းက နှင်းဖြူကို ကြိုက်နေလဲ မသိဘူး။ သူ့မှာ နှင်းဖြူ အဝတ်လဲနေတဲ့ ဗီဒီယိုတွေ အများကြီးပဲ။ နှင်းဖြူတစ်ခုကို ဖုန်းထဲကူးလာပြီး အခန်းထဲက ထွက်လာသည်။ နှင်းဖြူ ပင်တီထဲမှာ စိုနေပြီ.. ဒါပေမယ့် ထပ်ပြီး အာသာမဖြေတော့ဘူး။ ပြည့်စုံနေပြီ.. မောင်လေးနဲ့ နှစ်ယောက်တည်းရှိမယ့် အခြေအနေကိုစောင့်ရုံက လွဲလို့ပေါ့... ...
တစ်ပတ်ပြီး တစ်ပတ်ကုန်လွန်သွားပြီ။ နှင်းဖြူစောင့်နေတဲ့ အချိန်ရောက်လာခဲ့ပြီ။ မေမေက အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်သွားသည်။ နှင်းဖြူနဲ့မောင်လေးပဲ အိမ်မှာတစ်ပတ်လုံးနေရမည်။ နှင်းဖြူကျောင်းက ပြန်ရောက်တော့မောင်လေးက ဧည့်ခန်းထဲမှာ စာဖတ်နေသည်။
"မမ မေမေ မရှိတာ အခွင့်အရေးယူပြီး ဒီလောက်နောက်ကျအောင် အပြင်မှာ မနေသင့်ဘူး"
"နင်က အကြီးလား ငါက အကြီးလား လုပ်လိုက်ရ"
သူဘာမှ ပြန်မပြောတော့ဘဲ စာပြန်ဖတ်နေသည်။ နှင်းဖြူ လှုပ်ရှားဖို့ အချိ်န်ရောက်နေပြီ။
" သြော် တံခါးကလာခဲ့နော် ပြူတင်းပေါက်က မလာနဲ့"
နှင်းဖြူ အခန်းထဲ ဝင်လာပြီး ရေအရင်ချိုးလိုက်သည်။ သန့်ရှင်းနေဖို့ အရေးကြီးသည် မဟုတ်လား။ ပြီးမှခရမ်းရောင် ပင်တီတစ်ထည်နဲ့ တီရှပ် ဝတ်လိုက်သည်။ ခဏနေတော့မောင်လေး တံခါးလာခေါက်သည်။
နှင်းဖြူ ကခုတင်ပေါ်မှာထိုင်နေတော့ နှင်းဖြူရဲ့ ပင်တီကို သူမြင်နေရသည်။
"နင် ငါ့ကိုလာချောင်းနေတာဘယ်လောက် ကြာနေပြီလဲ"
နှင်းဖြူဘေးကို ပုတ်ပြလိုက်သည်။ သူ ခုတင်ပေါ်တက်လာပြီးဘေးမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။
" နင့်မှာ ရည်းစားရှိလား "
သူ့မှာ မရှိမှန်းသိရက်နဲ့မေးလိုက်သည်။ သူခေါင်းခါပြသည်။
" ဒါဆို ငါ နင့်ရဲ့ပထမဆုံးရည်းစားဖြစ်ပေးရမလား"
သူ့ပုံစံက မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ကြောက်နေသလိုပဲ၊ နှင်းဖြူ ကအဲဒါကိုပဲ အသည်းယားနေတာ။ နှင်းဖြူ ကပဲစပြီး သူ့နှတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက်သည်။ သူကလည်း ပြန်နမ်းသည်။ သူ့လက်က နှင်းဖြူကျော တစ်လျှောက် ပွတ်သပ်နေသည်။ နှင်းဖြူ သူ့ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ သူ့လီးကို ပွတ်ပေးနေသည်။ သူ့ညည်းသံက နှင်းဖြူရဲ့လည်ချောင်း ထဲဝင်သွားသည်။
ငါးမိနစ်လောက်နမ်းပြီး နှင်းဖြူ နှုတ်ခမ်းကို ခွာလိုက်သည်။ နောက်ပြီး တီရှပ်ကိုချွတ်လိုက်သည်။ သူ့လက်က ချက်ချင်းပဲ နှင်းဖြူနို့ပေါ်ရောက်လာသည်။ ကိုင်တာကြမ်းတယ်ဆိုပေမယ့် နှင်းဖြူအတွက် ပိုစိတ်လှုပ်ရှုားစေသည်။ နှင်းဖြူလက်တွေက သူ့ရှပ်ကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်နေသည်။ နောက် ချွတ်လိုက်သည်။ နှင်းဖြူ ထရပ်ပြီးပင်တီကို ချွတ်လိုက်သည်။ သူ့ခေါင်းကနှင်းဖြူ အဖုတ်နဲ့တည့်တည့်ရောက်နေသည်။ သူက နှင်းဖြူပေါင်တစ်ဖက်ကို မလိုက်ပြီး နှင်းဖြူရဲ့ပေါင်အတွင်းသားလေးတွေကို နမ်းလိုက်သည်။ နှင်းဖြူ တွန့်သွားသည်။ ယားတာကိုး... သူများတွေတော့မသိဘူး၊ နှင်းဖြူ ကတော့ အဲဒီလိုလာထိရင် ယားတာပဲ..။
အဲဒါနဲ့ သူ့ခေါင်းကိုနေရာပြောင်းပေးလိုက်သည်။ သူက အလိုက်သိစွာပဲ နှင်းဖြူရဲ့ ပူစီနှုတ်ခမ်းတွေကို လျက်ပေးသည်။ နောက်ပြီး လက်က အစေ့လေးကို ပွတ်ပေးသည်။ နှင်းဖြူ အသံတိုးတိုးလေး ညည်းနေမိသည်။
သူစေ့လေးကိုပြောင်းပြီးစုပ်နေသည်။ လက်တစ်ဖက်က နှင်းဖြူရဲ့ဖင်တွေကိုကိုင်ပြီး တစ်ဖက်ကပေါင်ကိုမြှောက်ထားသည်။ နှင်းဖြူ ကိုယ့်နို့သီးတွေကိုခြေနေမိသည်။ ခဏကြာတော့ သူ့ခေါင်းကိုတွန်းဖယ်လိုက်သည်။ ကောင်းနေပေမယ့် မတ်တပ်ဆိုတော့ ညောင်းလာပြီလေ။ နှင်းဖြူမောင်လေးကို အိပ်ယာပေါ်လှဲခိုင်း လိုက်သည်။ သူကဘောင်းဘီ တစ်ခါတည်း ချွတ်သွားသည်။
နှင်းဖြူ သူ့ဒစ်ဖျားလေးကို ငုံလိုက်သည်။ နောက်ပြီး ပါးစပ်ထဲမှာပဲလျှာနဲ့လိပ်ဆွဲလိုက်သည်။ လက်နဲ့အရင်းနားကို ပွတ်ပေးနေသည်။ ပြီးမှ တစ်ချောင်းလုံးစုပ်လိုက်သည်။ သူက နှင်းဖြူရဲ့ဆံပင်ကို ဆွဲပြီးအောက်ကနေ ထိုးသွင်းနေသည်။ နှင်းဖြူ သူ့ထိုးချက်နဲ့အညီ လိုက်ပေးလိုက်သည်။ သူ့အသက်ရှုသံတွေ မြန်လာပြီ။ နှင်းဖြူ အာခေါင်ကိုတင်းပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းစုပ်ပေး လိုက်တော့ နှင်းဖြူရဲ့ လည်ချောင်းထဲ cum တွေ စီးဝင်လာသည်။ သူနှင်းဖြူ ကို ပြုံးပြနေသည်။ နှင်းဖြူ သူ့ဘေးမှာလှဲပြီး သူ့လီးကိုလက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ကစားနေသည်။ မကြာခင်မှာပဲ နှင်းဖြူလက်ထဲမှာ မာကျောလာသည်။
နှင်းဖြူသူ့ကိုကျောပေးတဲ့ အနေအထားနဲ့ တက်ခွလိုက်သည်။ နောက်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုင်ချလိုက်သည်။ အတွေ့အကြုံကင်းနေတာ ကြာနေတော့ ခက်ခဲနေသည်။ ဒါပေမယ့် ဝင်သွားပြီ။ နှင်းဖြူ စပြီးဆောင့်နေပြီ။ နှင်းဖြူ အကြံကို အကောင်အထည်ဖော်လို့ ရနေပြီ။ သူ့ကိုပြောလိုက်သည်။
သူက လက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ ရိုက်နေသည်။ နှင်းဖြူအတွက် ပိုပြီးစိတ်ကြွစေသည်။ နှင်းဖြူ ပိုပြီး ပြင်းပြင်းဆောင့်နေမိသည်။ သူပြီးသွားပြီ ဆိုတာသိလိုက်သည်။ ကြိုသိနေလို့ အပေါ်ကနေတာ၊ နှင်းဖြူ ပြီးတဲ့ထိဆောင့်လို့ ရသည်။
နှင်းဖြူလည်း ကျဉ်လာနေပြီ။ မြန်မြန်ဆောင့်ချလိုက်တော့ နှင်းဖြူ cum တွေက စီးကျလာသည်။ ခဏ ဒီအတိုင်းနားနေလိုက်ပြီး သူ့ပေါ်က ဆင်းလိုက်ပြီး ဒီနေ့အတွက် အိပ်လိုက်ကြသည်။
မနက်ရောက်တော့ မောင်လေးက နှင်းဖြူရင်ခွင်ထဲမှာ အိပ်နေသည်။ နှင်းဖြူ နဖူးလေးကို နမ်းလိုက်သည်။ မောင်လေးကို ဖက်ထားရင်း ပြန်မှေးနေလိုက်သည်။ မောင်နှမ နှစ်ဦး အဝတ်မပါဘဲ ဖက်အိပ်နေတာ မေမေ မြင်ရင် ဘယ်လောက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မလဲ။ မောင်လေးလက်တွေက လှုပ်ရှားလာပြီး နှင်းဖြူ နို့တွေကို ပွတ်သပ်နေသည်။ နှင်းဖြူ ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာခဲ့ပြီ။
မောင်လေးက တစ်ဖက်ကို ငုံပြီးစို့လိုက်တော့ နှင်းဖြူ အားကုန်သလို ဖြစ်သွားသည်။ မောင်လေးကနို့သီးလေးကို စုပ်လိုက် ဖွဖွလေးကိုက်လိုက်နဲ့လက်ကလည်း နှင်းဖြူ အဖုတ်လေးကိုပွတ်နေသည်။ နှင်းဖြူ အရည်လေးတွေတောင် စိုနေပြီ။ သူက
" သား မမကိုချစ်တယ် "
နှင်းဖြူ ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိဘူး။ နှင်းဖြူ က sexual desire အတွက်ပဲ သူ့ကိုမျှော်လင့်ထားတာ ချစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ မသင့်တော်ဘူးလေ။ ပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံး ခံစားရလိမ့်မည်။
"မောင်လေးရယ် မင်းနဲ့မမက မောင်နှမတွေလေ ဒီလိုဆက်ဆံနေတာ လူမသိရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ချစ်မိရင်တော့ မတူတော့ဘူး။ အရမ်းခံစားရလိမ့်မယ်"
မောင်လေးမျက်ဝန်းတွေထဲမှာ မျက်ရည်တွေ ဝဲနေသည်။ နှင်းဖြူပါ ဝမ်းနည်းလာသည်။ နှင်းဖြူ တကယ်ချစ်မိနေပြီလား။ နှင်းဖြူ သူ့နှုတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက်သည်။ အကြာကြီး နမ်းနေမိသည်။ ပြီးမှ
"ဒီလိုလေးပဲနေကြရအောင်နော်.. မင်းနဲ့မမ က ချစ်သူမဖြစ်နိုင်ပေမယ့် sex partner တော့ဖြစ်လို့ရတယ်"
"မမ သဘောပဲ၊ ဒါပေမယ့် မမ သားကလွဲရင် ဘယ်သူနဲ့မှ ဒီလိုမနေဘူးလို့ ကတိပေး"
နှင်းဖြူ ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်သည်။ သူကနှင်းဖြူ ပေါင်ကကြားထဲကိုလျောဆင်းလာသည်။ နှင်းဖြူပေါင်ကားပေးလိုက်ရင်း အနမ်းတွေ ချွေနေသည်။ သူကလည်း အနမ်းမပျက်ဘဲ နှင်းဖြူကို စသွင်းနေသည်။ နှင်းဖြူ သူ့ကျောကိုကိုင်ပြီး တည့်အောင် ထိန်းပေးနေသည်။
မောင်လေးက ဖြည်းဖြည်းချင်းစလိုးနေသည်။ နှင်းဖြူတို့နှစ်ယောက် တင်းကျပ်စွာ ဖက်ထားကြသည်။ နှင်းဖြူ ညည်းသံတွေ သူ့ပါးစပ်ထဲမှာပျောက်သွားသည်။ သူက အရမ်းကို မက်မက်မောမော နမ်းနေတာ။ သူကနမ်းတာ ရပ်လိုက်ပြီး နှင်းဖြူလည်ပင်းလေးကို လျာနဲ့ ပွတ်ဆွဲနေသည်။ နောက်ပြီး အသွင်းအထုတ် မြန်လာသည်။ နှင်းဖြူလည်းအောက်ကနေ တုန့်ပြန်နေသည်။ သူ့ရဲ့စည်းချက်အတိုင်းပေါ့။ မောင်လေးက ခါးမတ်လိုက်ပြီး နှင်းဖြူ ခါးကိုကိုင်ကာ ပြင်းထန်စွာဆောင့်လိုက်သည်။ သူ နီးကပ်လာနေပြီ။
"မမကို လိုးနေတာကို မစဉ်းစားနဲ့ တခြားဟာတွေးနေ စိတ်ကို လျော့ထားလိုက်"
နှင်းဖြူမောင်လေးနဲ့တူတူ ပြီးချင်သည်။ သူထိန်းမထားနိုင်မှာလည်း စိုးရိမ်နေရသည်။ မောင်လေးက သဘောပေါက်လွယ်သည်။ သူ နားလည်မှာပါ။ နှင်းဖြူလည်း တူတူပြီးနိုင်အောင် ကြိုးစားနေသည်။ မကြာခင်မှာပဲ နှင်းဖြူနဲ့မောင်လေး အထွဋ်အထိပ်ကို တူတူရောက်ရှိကြသည်။ မောင်လေးက နှင်းဖြူပေါ်မှောက်ချလိုက်ပြီး အသက်ရှုမှန်အောင် ပြန်တည်ဆောက်နေသည်။ နှင်းဖြူ လည်း ပင်ပန်းနေတာနဲ့ အိပ်ပျော်သွားသည်။
နှင်းဖြူနိုးလာတော့ ဘေးမှာမောင်လေး မရှိတော့ဘူး။ နှင်းဖြူထပြီး ရေချိုးလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဘာအတွင်းခံမှမဝတ်ဘဲ ဂါဝန်တိုလေးကို ဝတ်လိုက်သည်။ မီးဖိုထဲဝင်ပြီး စားဖို့ချက်နေတုန်း ဖုန်းဝင်လာသည်။ မေမေ့ဆီကပဲ နှင်းဖြူကိုင်လိုက်သည်။
"သမီး မေမေ မနက်ဖြန်ပြန်ရောက်မယ်"
"ဟုတ် ဘယ်အချိန်လောက် ရောက်မလဲ"
"မနက်ပိုင်းလောက်ပဲ ၇ နာရီဝန်းကျင်ပေါ့"
"ဟိုလေ မေမေပြောတော့ တစ်ပတ်လောက် ကြာမယ်ဆိုပြီး"
မေမေပြန်ရောက်လာရင် မောင်လေးနဲ့နေရဖို့ ခက်သွားပြီ။ နှင်းဖြူ စိတ်ညစ်နေသည်။
"ဟုတ်တယ် မေမေလည်း အဲ့လောက်ကြာမယ် မှတ်တာ ရောက်တော့ အလုပ်တွေက ပြီးနှင့်နေပြီ"
"ဟုတ် ဒါပဲနော် သမီးဟင်းချက်နေလို့"
နှင်းဖြူ စိတ်ပျက်စွာပဲ ဖုန်းချလိုက်သည်။ ခဏနေတော့ မောင်လေးအောက်ဆင်းလာသည်။ နှင်းဖြူ ဆီလျှောက်လာပြီး နောက်ကနေ ဖက်လိုက်သည်။ ၅မိနစ်လောက် ဘာမှမပြောဖြစ်ဘဲ ဖက်ထားသည်။ တဖြည်းဖြည်း နှင်းဖြူ တင်ပါးမှာ မာလာတဲ့ အရာလေးကို ခံစားမိသည်။ ဖက်ထားတဲ့ လက်တွေကို နှင်းဖြူ ဖယ်လိုက်ပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်သည်။
"မေမေ မနက်ဖြန်မနက် ပြန်ရောက်မယ် "
မောင်လေးနဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံမိတော့ နှင်းဖြူ တို့အတွက် စကားလုံးတွေ မလိုအပ်တော့ဘူး။ နှင်းဖြူ စားပွဲပေါ်တက်ပြီး ဒူးထောင်ထားလိုက်သည်။ မောင်လေးက ဘောင်းဘီကို လျောချပြီး နှင်းဖြူ ပေါင်ကြားမှာ ရပ်လိုက်သည်။ အဲဒီနေ့က နှင်းဖြူ တို့ တစ်နေလုံး နားလိုက် ချစ်လိုက်ကြနဲ့။ ညရောက်တော့ အနမ်းတွေနဲ့ နှုတ်ဆက်လိုက်ကြသည်။ ကိုယ့်အခန်းကိုယ် ပြန်ကြကာ မောပန်းမှုတွေနဲ့အတူ အိပ်စက်လိုက်သည်။
မေမေပြန်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်း နှင်းဖြူ တို့ သာမန်မောင်နှမတွေ အဖြစ်နဲ့ပဲ နေကြတော့သည်။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားတာက မောင်လေးနဲ့ စကားသိပ်မပြောဖြစ်ဘူး။ မျက်နှာချင်းတောင် သိပ်မဆိုင်ဖြစ်ဘူး။ မေမေကတောင် ရန်ဖြစ်ထားတယ် ထင်နေတာ။ တကယ်တော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကြာကြာ မြင်နေရရင် စိတ်တွေမထိန်းနိုင်လို့ရှောင်နေတာ။
ဒီလိုနဲ့ မောင်လေး ဆယ်တန်းဖြေပြီး အောင်တော့ နှင်းဖြူလည်း အလုပ်စဝင်ရတော့မည်။ နှင်းဖြူ အလုပ်က ဝန်ထမ်းဆိုတော့ စစချင်း နယ်ဖက်ကို တာဝန်ကျသည်။ နှင်းဖြူ မောင်လေးနဲ့ ချစ်တဲ့အချိန်က စပြီး အခုထိ ဘယ်သူနဲ့မှ လိင်မဆက်ဆံတော့ဘူး။ သစ္စာရှိတယ်ပဲခေါ်မလား၊ နှင်းဖြူမောင်လေးကလွဲရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ စိတ်ဝင်စားလို့ကို မရတော့တာ.. သူ့ကိုပဲ သတိရနေမိသည်။
သူကော သူလည်းနှင်းဖြူလိုပဲ ခံစားနေရလား။ နှင်းဖြူ သိချင်သည်။ ၃နှစ်တောင်ရှိသွားပြီ။ သူဘာလို့နှင်းဖြူကို မဆက်သွယ်တာလဲ? သူမေ့သွားပြီလား? ချစ်သူများရနေလား? နှင်းဖြူ အတွေးတွေထဲမှာပဲ နစ်မြုပ်နေသည်။ တစ်နေ့ နှင်းဖြူ အလုပ်လုပ်နေတုန်းခေါ်သံ ကြားလိုက်သည်။
နှင်းဖြူ ထွက်ကြည့်လိုက်တော့ မောင်လေး....။ အရင်ကနဲ့မတူဘဲ အရမ်းကိုယောက်ျားပီသလာသည်။ သူက နှင်းဖြူကို ပြုံးပြနေသည်။ နှင်းဖြူ ပြေးဖက်လိုက်မိသည်။ သူများတွေကတော့ နှင်းဖြူ ချစ်သူလို့ ထင်နေမှာသေချာသည်။ နှင်းဖြူ မှာ မောင်လေးရှိတာ မသိကြဘူးလေ။ နှင်းဖြူ ခွင့်ယူပြီး နှင်းဖြူ ငှားနေတဲ့ အိမ်လေးဆီ မောင်လေးကို ခေါ်လာသည်။
"မမက အရင်အတိုင်းပဲနော် ဘာမှမပြောင်းလဲဘူး"
"မင်းဘာလို့ အခုမှလာတာလဲ.. သုံးနှစ်လုံး မဆက်သွယ်ဘဲ နေပြီးတော့မှ"
"မမ စိတ်ဆိုးနေမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်.. သား တစ်ချိန်လုံး မမကိုမေ့ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တယ်.. ဒါပေမယ့်... အလကားပဲ မမကို ဘယ်လိုမှမေ့မရဘူး"
"ဒါဆို ငါ့ကိုမေ့ပစ်ဖို့ ကြိုးစားနေလို့ အဆက်အသွယ် မလုပ်တာပေါ့ ဟုတ်လား"
"အခု မမနဲ့ တူတူနေဖို့ ထွက်လာခဲ့တာ အိမ်ကို မပြန်တော့ဘူး"
"မင်းက ငါနဲ့တူတူနေမယ်ဆိုတာ ချစ်သူတွေလိုလား မောင်နှမလိုလား"
မောင်လေးက နှင်းဖြူကို ဖက်ပြီးနှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်လိုက်သည်။ နှင်းဖြူလည်း ပြန်ဖက်ထားရင်း အနမ်းတွေကို တုန့်ပြန်နေသည်။ အရင်ကနဲ့ မတူတာက နှင်းဖြူ မော့ထားရတာ.. သူက အရပ်ရှည်လာတယ်လေ။ အနမ်းတွေကို ရပ်လိုက်ပြီး မောင်လေးက
"နှစ်ခုလုံးပဲ မမကို အစ်မတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း ချစ်တယ်.. ချစ်သူအနေနဲ့လည်း လိုချင်တယ်"
နှင်းဖြူ ဘာမှပြန်မပြောဘဲ သူ့ကိုထိုင်ခုံပေါ် ထိုင်စေလိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူ့ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး သူ့ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဆွဲနေသည်။ သူ့ဘောင်းဘီနဲ့အတူ အတွင်းခံကိုပါ ဒူးအထိဆွဲချသည်။ သူကလည်း ကူချွတ်ပေးသည်။ နှင်းဖြူ သိပ်တော့မအံ့သြပါဘူး။ ဒီလောက်တော့ ကြီးလာမှာပဲလေ။ အရင်ကထက်တော့ ပိုတုတ်ပြီး ပိုရှည်လာသည်။ နှင်းဖြူ လက်နဲ့အရင် အထက်အောက်ပွတ်နေသည်။ အရမ်းမာလာကာမှ အဖျားလေးကို လျှာနဲ့လျက်ရင်း ဥလေးတွေကို လှုပ်ပေးသည်။ ပြီးတော့ တစ်ဝက်လောက်ထိ စုပ်ပေးနေသည်။ သူက နှင်းဖြူ ဆံပင်တွေကို ပွတ်သပ်နေရင်း ပါးစပ်ကလည်း တအင်းအင်းနဲ့ငြီးနေသည်။ နှင်းဖြူ အငမ်းမရကို စုပ်နေမိ၏။ ပါးစောင်တွေ ခွက်တဲ့ထိ ညှစ်ပြီးစုပ်လိုက် အသွင်းအထုတ်လုပ်လိုက်နဲ့ မကြာခင်ပဲ နှင်းဖြူ ပါးစပ်ထဲကို စီးဝင်လာတော့သည်။ နှင်းဖြူ မျိုပစ်လိုက်သည်။ သူက နှင်းဖြူ ကိုထူပြီး သူ့သုတ်ရည်တွေပေနေတဲ့ နှင်းဖြူ နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်နေသည်။
နှင်းဖြူ ပြုံးပြလိုက်သည်။ ပြီးတော့ နှင်းဖြူ အိမ်တံခါးသွားပိတ်သည်။ တစ်ခါတည်း ထဘီပါ ချွတ်ချလိုက်သည်။ မောင်လေးကလည်း အဝတ်ကင်းမဲ့နေပြီ။ နှင်းဖြူ လည်း အကုန်ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။
"မမ အရင်က အတိုင်းပဲဆိုတဲ့စကားကို ရုတ်သိမ်းတယ်.. မမနို့တွေ ပိုကြီးလာတယ်.. ဘယ်သူတွေနဲ့နေသေးလဲ"
နှင်းဖြူ သူ့ခေါင်းကို ပုတ်လိုက်ပြီး
သူက ရီသည်။ တော်ပါသေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံနဲ့
"မင်းဟာက အပြည့်အဝ မမာသေးဘူး မမ လုပ်ပေးမယ်"
နှင်းဖြူ ပြောရင်း သူ့ရှေ့ဒူးထောက်လိုက်ပြီး နို့နှစ်လုံးကို ပင့်ကိုင်ထားသည်။
" ဒီကြားထဲ ထည့်လိုက်"
မောင်လေးမျက်နှာက ဝင်းလက်သွားသည်။ နှင်းဖြူ သူ့ကို boobs job ပေးတော့မှာလေ။ သူက နှင်းဖြူ နို့နှစ်လုံးကြားထဲ လီးကိုထည့်လိုက်သည်။ နှင်းဖြူ နို့ တွေနဲ့ သူ့လီးကို ညှပ်ထားရင်း အထက်အောက် ပွတ်ပေးနေသည်။ သိပ်မကြာဘူး ..သူ့လီးက အရမ်းမာနေပြီ။ နှင်းဖြူ ရပ်လိုက်သည်။ သူ့ပေါ်တက်ခွလိုက်ပြီး သူ့လီးကိုကိုင်ကာ ဖြည်းဖြည်ချင်း အဖုတ်ထဲ သွင်းနေသည်။ သူက နှင်းဖြူ နို့ တွေကို စို့နေသည်။ သူက ထွားလာတော့ နှင်းဖြူ ရဲ့သုံးနှစ်လောက် အထိအတွေ့ မရှိတဲ့ အဖုတ်လေးနဲ့တော်တော်
ကျပ်နေသည်။ အဖျားလေးပဲ ဝင်သေးသည်။ နှင်းဖြူ က သိပ်စိတ်မရှည်တတ်တော့ အတင်းထိုင်ချ ပစ်လိုက်ရာ..
နှင်းဖြူ အကျယ်ကြီး အော်မိသည်။ တော်တော်လည်း နာတာကိုး...
"မမက ဇွတ်ပဲ နည်းနည်းတောင် စိတ်မရှည်ဘူး ဘေးအိမ်တွေကြားတော့မှာပဲ"
နှင်းဖြူ ငေါက်လိုက်သေးသည်။ ခဏမလှုပ်သေးဘဲ သူ့ကိုမှီပြီးနားနေသည်။ သူက ဂုတ်သားလေးကို နမ်းရင်းနို့သီးလေးတွေ ကိုခြေပေးနေသည်။ နှင်းဖြူ တဖြည်းဖြည်းကောင်းလာနေပြီ။ မှန်မှန်လေးဆောင့်နေလိုက်သည်။ နာကျင်တာတွေပျောက်လာပြီး နှင်းဖြူနောက်ကို လှန်ချလိုက် သည်။ သူက ဖမ်းထိန်းပေးထားသည်။ နှင်းဖြူ မဆောင့်တော့ဘဲ ရပ်လိုက်သည်။ သူက နှင်းဖြူ ခါးကိုကိုင်ပြီး အောက်ကနေ ပင့်လိုးနေသည်။ နှင်းဖြူတစ်ကိုယ်လုံးကို အနောက်လှန်ထားသည်။ ပြုတ်ကျမတတ်ပဲ။ သူက ခါးကိုသေချာကိုင်ထားလို့ သာပဲ။ သူမြန်လာနေသည်။ နှင်းဖြူနို့တွေက ဆောင့်ချက်အတိုင်း ရမ်းခါနေ၏။ နှင်းဖြူ အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှုနေရင်း မောင်လေး လိုးတာကိုပဲ အရသာခံနေမိသည်။ မောင်လေးက အရမ်းမြန်မြန်လုပ်နေပြီ။
နှင်းဖြူ လည်း သူ့လည်ပင်းကိုကိုင်ကာ ပြန်ဆောင့်နေသည်။ အသံတွေက ဆူညံလာသည်။ သူ့ညည်းသံ နှင်းဖြူအော်သံနဲ့ အသားချင်းရိုက်ခတ်တဲ့ အသံတွေက ပိုမိုကျယ်လောင်လာသည်။ နှင်းဖြူ ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ရင်း သူ့ဆီကို ပန်းထုတ်လိုက်သည်။ သူကလည်း အဆက်မပြတ်ဆောင့်ရင်း နှင်းဖြူ ပြီးသွားပေမယ့် သူ့အတွက် နှင်းဖြူ ပြန်ဆောင့်ပေးနေသည်။ ၅ မိနစ်လောက်ရှိတော့ သူလည်းနှင်းဖြူအထဲကို သုတ်တွေလွှတ်ပြီး နှင်းဖြူ ကိုတင်းကျပ်စွာဖက်ထားလေတော့သည်..။